ह्वात्तै घट्यो डलरको भाउ , आज कति ?:: Naya Nepal
काठमाण्डौ । आज आइतबार अमेरिकी डलरसँगै युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको भाउ घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि कायम विदेशी मुद्राहरुको विनिमय दरअनुसार डलरको भाउ आज ४६ पैसाले घटेको हो। योसँगै आज प्रतिडलर खरिददर ११७.४८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११८.०८ रुपैयाँ कायम भएको छ। डलरको भाउ गत शुक्रबार ५२ पैसाले बढेको थियो।यो दिन प्रतिडलर खरिददर ११७.९४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११८.५४ रुपैयाँ कायम भएको थियो। युरोको भाउमा आइरहेको गिरावटले आइतबार पनि निरन्तरता पाएको छ।
आज पनि युरोको भाउ ४१ पैसाले घटेको छ। यो गिरावटसँगै आज प्रतियुरो खरिददर १३६.९४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३७.६४ रुपैयाँ कायम भएको छ। युरोको भाउमा गत शुक्रबार पनि २० पैसाले घटेको थियो। योसँगै शुक्रबार प्रतियुरो खरिददर १३७.३५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३८.०५ रुपैयाँ कायम भएको थियो। आज पाउन्ड स्टेर्लिङको भाउ पनि ४४ पैसाले घटेको छ।
यो गिरावटसँगै आज प्रतिपाउन्ड स्टेर्लिङ खरिददर १५०.०६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५०.८३ रुपैयाँ कायम भएको छ। गत शुक्रबार पाउन्ड स्टेर्लिङको भाउ ९७ पैसाले बढेको थियो। यो बढोत्तरीसँगै शुक्रबार प्रतिपाउन्ड स्टेर्लिङ खरिददर १५०.५० रुपैयाँ र बिक्रीदर १५१.२७ रुपैयाँ कायम भएको थियो।
वीर अस्पतालमा नि’धन भएका सं’क्रमितको आँखा निकालिएको होइन’, का’रागा’रले सार्वजनिक सिसिटिभी फुटेज्
काठमाडौ । रुपन्देहीका रामलखन जैसवालको नि’धनलाई अस्वभाविक भन्दै परिवारका सदस्यले अस्वभाविक भन्दै वि’रोध गरेपछि केन्द्रीय का’रागार कार्यालय र वीर अस्पतालले पत्रकार सम्मेलन गरी त्यसबारेमा धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । जैसवालको परिवारका सदस्यले उनको को’रोनाका कारण नि’धन नभई घ’टना र’हस्यम भएको दा’वी गरेका थिए । का’रागार र अस्पतालले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै असोज ३ गते राति १०ः५५ बजे उपचारको क्रममा ६३ वर्षीय जैसवालको नि’धन सामान्य ढंगबाटै भएको जिकिर गरेको हो ।
वीर अस्पतालमा उपचारका लागि लगेका ६३ वर्षीय कै’दीको नि’धन बारे पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रीय का’रागारले सिसीटिभी फूटेज समेत सार्वजनिक गरेको छ। घ’टना र’हस्मयी भन्दै परिवारका सदस्यले पोष्टमार्टम गर्न माग राखेपछि का’रागारले यस अघि नै आवश्यक परे सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गर्ने जनाएको थियो ।
पार्किडसन र उच्च रक्तचापबाट ग्र’सित जैसवाललाई अचानक असोज ३ गते राति ९ः४५ बजे श्वास प्रश्वासमा स’मस्या आएपछि बन्दीगृहभित्रबाट केन्द्रीय का’रागार अस्प
तालमा पठाइएको थियो । तर त्यहाँ उपचार सम्भव नहुने देखिएपछि उनलाई वीर अस्पताल रेफर गरिएको वताइएको छ । थप उपचारका लागि उनलाई वीर अस्पताल पुर्‍याइए पनि उनी जीवितै रहेको कुनै संकेत नदेखिएपछि चिकित्सकहरुले उनलाई मृ त घोषणा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चाको क्रममा उनको नि’धन भएपछि पोष्टमार्टमका लागि उनको को’रोना परीक्षण गर्दा असोज ५ गते रिपोर्ट पोजेटिभ आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विगत तीन दिनदेखि मृ’तकको श’व श’वगृहमा रहेका कारण श’व स’ड्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेका कारण श’वमा फो’काहरु देखिनु, सुन्निनु मुख र नाकबाट तरल पदार्थ निस्कनु सामान्य प्रक्रिया भएको अस्पतालका निर्देशक डा। केदारप्रसाद सेन्चुरीले बताएका छन् ।
श’वलाई रेफ्रिजेरेटरमा नराख्दा श’वमा त्यसखालका संकेतहरु देखिनु सामान्य प्रक्रिया भएको डा। सेन्चुरीले बताए । मेडिकल अवस्थालाई नबुझी सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चार माध्यममा का’रागारभि’त्र वा अस्पतालमा उनको ज्या’न लिइएको, आँखा निकालिएको, चो’टप’टक लागेको, घाँटीमा चो’ट देखिएको जस्ता समाचार आएको प्रति ग’म्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं, असोज ७। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले कुलमान घिसिङका कारण नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भन्नेहरुलाई पाखेको संज्ञा दिएका छन् ।
हिजो राति प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै सल्लाहकार थापाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् पत्रकार धमलालेले कुलमानजीकै कारण नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो नि ? भनेर प्रश्न सोध्दा थापाले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘त्यसो भन्नेहरु पाखे हुन् ।
उहाँहरुको त्यो सन्तुलित विचार, बुझाई र दृष्टिकोण होईन् ।’ थापाले अघि भनेका छन्,‘कुलमानजी भगवान होईन, उहाँ मानिस हो । तपाईं मानिस हो । म मानिस हो । हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू मानिस हो । कुलमानजीपनि मानिस हो । जनताले सडकमा उत्रिएर भगवान भनेपनि हामीले भगवान भन्छौं त । हामी मान्छे हो ।’ भिडियो : प्राईम टाइम्स टेलिभिजन